Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanondranana “devises” antsokosoko: Lehilahy iray harovan’ny mpanolontsain’ny filoha
Fanondranana “devises” antsokosoko: Lehilahy iray harovan’ny mpanolontsain’ny filoha
Vao sambany no nikàsa hivoaka any ampitandranomasina ity lehilahy iray antsoina hoe Ntsay Kevin, kanefa tratehaky ny mpiasan’ny fadintseranana teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, saika hanondrana vola vahiny na “devises” antsokosoko mitetina 7500 Euro. Ny andron’ny 14 febroary lasa teo no nitrangan’ity raharaha ity. Saika hiazo an’i Parisy renivohatr’i Frantsa i Ntsay Kevin no tratra nitondra an’io vola vahiny io izay nafenina tao anatin’ny entana entin-tanana na ny “bagage à main”. Rehefa nataon’ireo mpiasan’ny fadintseranana ny fanadihadiana tsotsotra toy ny fanaon’izy ireo rehefa misy ny tranga tahaka izao, dia hita fa tsy misy na iray aza ny taratasy fanamarinana avy amin’ny banky na orinasa mpanakalo vola, tsy misy ihany koa ny “declaration de devises”. Raha ny fehezan-dalàna momba ny fadintseranana (code des douanes) sy ny fehezan-dalàna momba ny fifanakalozam-bola (code des changes) izay mbola manankery eto amintsika anefa dia tokony nisy an’ireo taratasy voalaza ireo niaraka tamin’ity vola vahiny mitetina 7500 euro ity. Avy hatrany dia nentina tao amin’ny biraon’ny “Unité Mobile de Surveillance” eo anivon’ny seranam-piaramanidina Ivato ny lehilahy ary nanaovan’ireo mpiasan’ny fadintseranana famotorana. Rehefa nandeha ny fanontaniana dia nilaza ho manana mpisolovava hiaro azy i Ntsay Kevin, tsy iza izany fa ny lehilahy iray mitondra ny anarana Rakotovao Miandrafenosoa. Ity farany izay marihana fa mpanolontsaina teknika ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tonga teny an-toerana moa rehefa nantsoina i Rakotovao Miandrafenosoa ka niaro mafy ny namany izay tratra nandika lalàna, nikàsa ny hanondrana vola vahiny antsokosoko. Raha ny tena marina dia tsy mpisolovava akory ity olona nolazain’i Ntsay Kevin fa mpisolovavany fa namany akaiky, mpiara mianatra tao amin’ny sekoly INSCAE. Na dia mazava ary hita mibaribary izao aza fa nandika lalàna i Ntsay Kevin izay tsy nanana na dia taratasy fanamarinana iray aza tamin’ireo vola vahiny saika nentina tany Frantsa dia miaro fatratra azy ity mpanolontsain’ny filoham-pirenena ity. Tsy vitan’izay ihany fa raha ny fantatra, araka ny loharanom-baovao marim-pototra, dia misy ny fanelanelanana miaro baiko avy any an-dapa mba hanakatonana ity raharaha ity. Tsy fantatra moa hoe impiry no efa nitondra vola “devises” tany ampitandranomasina tany i Ntsay Kevin fa tamin’ity indray mitoraka ity kosa ny tenany vao tratehaky ny fadintseranana. Ela nitoratorahana ka nahavoa mason’angatra, hoy ny fitenin’ny Ntaola Malagasy izay.
Organès Rakotomihantarizaka: “Nahavita betsaka”, hoy i Monja Roindefo
Minisitra ny Filaminana anatiny nandritra ny fotoana naha-praiminisitra an’i Monja Roindefo i Organès Rakotomihantarizaka, izay nodimandry tany Morondava tamin’iny herinandro lasa iny. Omaly no nanatanterahana ny fandevenana ny nofo mangatsiakan’ity minisitra teo aloha niahy ny pôlisim-pirenena ity. Isan’ireo tonga nanotrona sy nanome voninahitra farany ny nofo mangatsiakan’i Organès Rakotomihantarizaka tany Ambatofinandrahana omaly ny Praiminisitra teo aloha Monja Roindefo. Ity farany izay nahatsiaro fa isan’ny asa niarahany tamin’ity minisitra ny Filaminana anatiny tao amin’ny governemantany ny fanatanterahana an’ireo vary mangatsiaka tsy efan’ny fitondrana Ravalomanana momba ny pôlisim-pirenena. Isan’izany ny fanondrotana tamin’ny laharany avy (avancement) sy ny tambiny mifandraika tamin’izany ho an’ireo pôlisy amperin’asa tamin’izany.